600L Plastic Cooler fitoeran-javatra
Product Features voahadihady sakafo manta kilasy PE toy ny fitaovana, dingana iray-koronosy roa heny-Decker kaontenera no tonga lafatra miasa eo ambany -40 ℃. Asidra sy alkali mahatohitra, mafy sy mateza. Azo idirana amin'ny alalan'ny tanana pallet Jack avy amin'ny lafiny roa, ary ny iray kamiao avy forklift lafiny efatra, stackable. Range ny Fampiharana a: Sakafo famokarana. B: akora malalaka fitehirizana. d: Low hafanana mangatsiaka turnover fitahirizana. D: Low hafanan'ny thawing ny vokatra anaty rano sy ny vokatra hohanina. E: Fresh sy hipoaka refrigerated ...
550L Plastic Voaro coolers ranomandry boaty
65L Plastika Voaro coolers ranomandry boaty
Product manasongadina ny: Avo hery sy ny fikirizana, mateza B: One-dingana koronosy ny roa-Decker, tsara voaisy tombo-kase, mahafa-po insulation fananany C: (Pora) sombin-javatra insulation nampidirany hitandrina ny mari-pana D: Virgin zavatra MDPE Afaka mampiasa mivantana ny sakafo ny e : mahatohitra ultraviolet (UV), fadeless Range ny Application mety amin'ny rojo ny vaovao mangatsiaka sakafo, vaksiny sy fanafody. Tena tsara ny fitaovana mba ho ampiasaina amin'ny asa ivelan'ny trano sy ny fialam-boly, toy ny, fanjonoana, nitoby sns, isan-karazany Tra ...